ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု ဖြေရှင်းရေးအဆို မှတ်တမ်း အဖြစ်သာထားရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးအတွင်း မော်တော်ယာဉ် စီးရေ များပြားလာမှုကြောင့် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုများ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးရန် အစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုကို မှတ်တမ်းအဖြစ်သာ ထားရှိရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်တင်ဝင်းက ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းလျော်ကြေး လယ်တစ်ဧက ကျပ်သိန်း ၇၀ ဖြင့် ယာယီသဘောတူ
သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအတွင်းပါဝင်သည့် လယ်ယာမြေများ အတွက် လျော်ေ ကြး ငွေကို တစ် ဧက လျှင် ကျပ်သိန်း ၇၀ ပေးရန် နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု လယ်သမားများက မဇ္ဈိမ ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ပြောသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အင်ဒို နီးရှား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Sebastianus Sumarsono အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် နေပြည်တော် ရှိ ဇေယျာသီရိ ဗိမာန်၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တာဝန်ပြီးဆုံး ၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Sebastianus Sumarsono အား လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ပြိုင်ဘက်များကို အနိုင် ကစားပြီး ရွှေရအောင် ယူမည်ဟု မြန်မာ အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း နည်းပြ ပြောကြား
(၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီး ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲများတွင် ပြိုင်ဘက် အသင်းထိုင်းကို အနိုင် ကစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူး သဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ဆီးဂိမ်း ချန်ပီယံ ဗီယက်နမ် အမျိုးသမီး အသင်းကို အနိုင်ကစား၍ ရွှေတံဆိပ် ရယူမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း နည်းပြ ဂျပန်လူမျိုး ကုမာရာက မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားသည်။
မြန်မာ စက်ဘီးသမားများ တစ်ဦးချင်းတွင် ရွှေရပါက ကျပ်သိန်း ၅ဝ ရမည်
အရှေ့တောင် အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ၏ စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲတွင် ကစား သမားများ အနေဖြင့် ရွှေတံဆိပ် ဆွတ်ခူးပါက အသင်းလိုက် ပြိုင်ပွဲတွင် ကျပ်သိန်း ၁ဝဝနှင့် တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲများတွင် ကျပ်သိန်း ၅ဝ ချီးမြှင့် မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသက်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအငြင်းပွားဖွယ် အသည်းအစားထိုး လှူဒါန်းမှုပြဿနာ ပြေလည်မှုမရသေး
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့၊ ဘုရားနီးကျေးရွာနေ ကိုနိုင်ဦးက ကျောင်းကုန်းမြို့ ဧရာဝတီ ပဲသန့်စင်စက်နှင့် ဒါးကမြို့ ခိုင်မေတ္တာ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ကိုမောင် မောင်ယု(ခ)စဖို၏ အစ်ကို ဦးမောင် မောင်ဦးအား အိနိ်္ဒယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ရှိ မီဒန်တာဆေးရုံ၌ အသည်းတစ်ခြမ်း အစားထိုးလှူ ဒါန်းခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုများနှင့် နစ်နာကြေး ကိစ္စများ အတွက် ဖြစ်ပေါ် လာသော ပြဿနာများ အား ဖြေရှင်းရာတွင် ပြေလည်မှု မရရှိသေးကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ထောက်လှမ်းရေးများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး မထိခိုက်ရန် အရေးကြီးဟု ဦးရဲထွဋ်ဆို
နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနှင့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးအတွက် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များ အနေနှင့် အခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် နိုင်ငံသားတို့၏ မူလအခွင့်အရေးကို မထိခိုက်စေဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီး ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရန် တွန့်ဆုတ်နေခြင်းက မရိုးသားမှုဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဆို
ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့် ပွဲစဉ်များအတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည်
လာလီဂါကလပ် ဗလင်စီယာအသင်းသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အသင်း၏ဘဏ္ဍာ ရေးအခက်အခဲ များ ကြောင့် ပြည်ရင်းမြှုပ်နှံမှုများရယူရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်းသိရသည်။
အမေရိကန်ရှိ ထိပ်တန်းအဆင့် သတ်မှတ်ခံရသော တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် မြန်မာ ကျောင်းသားများ ပညာ သင်ယူနိုင်
အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ပေါင်း များစွာထဲမှ Top 15 ရာခိုင်နှုန်းအဆင့် သတ်မှတ်ခံ ထားရသော တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် James Medison University, South U.S News and World Report မှ သတ်မှတ်သော ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ် များထဲတွင် အဆင့်နှစ် နေရာတွင်ရှိပြီး မြန် မာ ကျောင်းသား များ လည်း ပညာ သင်ယူနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ယနေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသော တရုတ်ဆေးခန်းနှင့် တရုတ်ဆေးဆရာဝန်များမရှိသေးဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြောကြား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ယနေ့အချိန်အထိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသော တရုတ်ဆေးခန်းနှင့် တရုတ်ဆေးဆရာဝန်များ မရှိသေးကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ပထမအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန် အစည်း အဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ပေါက်တော ဒုက္ခသည် စခန်းမီး၊ ကလေးတဦးသေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ် ငှက်ချောင်း ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ မီးလောင်တဲ့အတွက် စခန်းထဲက အိမ်တွေ အားလုံး မီးထဲပါသွားခဲ့ပြီး ကလေးတစ်ယောက်လည်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရောက် မြန်မာ ကလေးငယ်များ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ ဖြစ်တဲ့ မဲဆောက်မြို့အပါအ၀င် တာ့ခ်ခရိုင်တွင်း မှာ ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ် မူတွေဟာ နှစ်စဉ်လိုလို များပြားလာနေတာပါ။
မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်း ရုပ်သိမ်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မိကျောင်းကန်ရပ်ကွက် အပိုင်း (၁၊၂၊၃) မြေနေရာပြန်ရဖို့ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြနေသူတွေဟာ ၃ လအတွင်း မြေရာကိစ္စကို ကြိုးစားဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကတိပေးခဲ့တာကြောင့် ဒီနေ့သပိတ်စခန်းကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခံလိုက်ရတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း သယ်ဆောင်လာတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ကား ထောင်တွင်းမှ ထွက်လာစဉ်။ (ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃)။
စစ်ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် တယောက်ကို သူ့ရဲ့ နော က် ဆုံး အချိန် အသနားခံစာကို တရားရုံးချုပ်က ပယ်ချခဲ့ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ ကြာသပတေးနေ့က ကွပ်မျက်လိုက်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒေသစံတော်ချိန် ၁၀ နာရီ ၁ စက္ကန့်မှာ Abdul Qader Mollah ကို ကြိုးပေးကွပ်မျက်လိုက်တဲ့အကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရာရှိတွေက အတည်ပြုပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (Credit: ABC)
ဂျပန်-အာဆီယံ ​ညီလာခံအတွင်း ​မြန်မာနိုင်ငံကို ​ဂျပန်နိုင်ငံက ​ဂျပန်ယမ်းငွေ ​ဘီလီယံ ​၆၀ ​ချေး ဌားကြောင်း ​ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ​ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး မြန်မာ-အိန္ဒိယ ဆွေးနွေး
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် အိန္ဒိယကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Bikram Singh တို့အား နယူးဒေလီမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (Photo:AFP)
အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ခြောက်ရက်ကြာခရီး ရောက်ရှိနေသော ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် အိန္ဒိယတပ်မတော် အရာရှိ များနှင့်တွေ့ ဆုံ ကာ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။
City Mart ပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်နွှယ်နေသော ဂိုဒေါင်တွင် တွေ့ရှိရသည့် ၀ိုင်၊ အရက်များအတွက် တရားဝင် အထောက်အထားမူရင်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဥပဒေဖြင့် အရေးယူရန် စီစဉ်
တရားမ၀င်ဝိုင်နှင့် အရက်ပုလင်းများ Mobile Team က စစ်ဆေးနေသည်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်
City Mart ပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိသော Premium Food Sevice Products ကုမ္ပဏီမှ ၀ိုင်၊ အရက်တို့ကို တရားမ၀င် တင်သွင်းခဲ့သည့်အတွက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ဖြင့် အရေးယူမှုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ Mobile Team မှ သိရသည်။
တရားရုံးတင် ကွပ်မျက်ခံလိုက်ရတဲ့ မြောက် ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် Jang Song Thaek
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့ အဓိက အကြံပေးတဦးလို့ ယူဆကြတဲ့ သူ့ရဲ့ ဦးလေးလည်းတော်စပ်သူ Jang song Thaek ကို မြောက်ကိုရီးယား အာဏာပိုင်တွေက ကွပ်မျက် လိုက်ပါတယ်။ Jang ဟာ အထူးစစ်ခုံရုံးမှာ ကြားနာစစ်ဆေးမှု ခံပြီးနောက်၊ ကြာသာပတေးနေ့မှာ သူ့ကို ကွပ်မျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရပိုင် ကိုရီယား ဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီ က ကြေညာ ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၁၄သန်းထိ ရှိလာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ​ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနဲ့ ​ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ​သေဆုံးသူတွေ ​သိသိသာသာများ လာ တယ် လို့ ​ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ​ပြောပါတယ်။
ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု ဖြေရှင်းရေးအဆို မှတ်တမ်း အဖြစ်...
ပရိဘောဂလုပ်ကိုင်နေသည့် အိမ်တစ်ခုကို သစ်တောခေါင်းနှ...
သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းလျော်ကြေး လယ်တစ်ဧက ကျပ်သိန်း ၇၀ ဖြင့်...
ပြိုင်ဘက်များကို အနိုင် ကစားပြီး ရွှေရအောင် ယူမည်ဟု...
မြန်မာ စက်ဘီးသမားများ တစ်ဦးချင်းတွင် ရွှေရပါက ကျပ်...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအငြင်းပွားဖွယ် အသည်းအစားထိုး...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရန် တွန့်ဆုတ်နေခြင်းက မရိုးသားမှု...
ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့် ပွဲစဉ်များအတွက် ...
အမေရိကန်ရှိ ထိပ်တန်းအဆင့် သတ်မှတ်ခံရသော တက္ကသိုလ်ကြ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ယနေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထား...
နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်...